Ambony ny poker tanana zavatra tsy
fandaharana manomboka poker tanana
ambony ny poker manomboka tanana
fandaharana texas holdem tanana
poker fifaninanana ao granada
Nosoratan'i Fanjakana ny Loholona John Bonacic (R-Distrika 42), antenimieran-Doholona Volavolan-dalàna S8153 nandalo fifidianana ny 45-17 ao amin'ny Antenimiera manodidina ny 2 ora maraina asabotsy maraina ao Albany. Ny volavolan-dalàna ny hetra DFS mpandraharaha toy DraftKings sy FanDuel amin'ny mahomby tahan'ny 15.5 isan-jato amin'ny lalao lehibe ny vola miditra, miaraka amin'ireo monies ho tarihana ho amin'ny fandaharam-pampianarana any New York.
"Ny volavolan-dalàna maneho ny voahevitra dingana fanaovan-dalàna, izay bipartisanship sy fahavononana ny marimaritra iraisana nentina ny andro, ary isika no tena velom-panantenana ny Governora Cuomo, dia famantarana ity volavolan-dalàna ity." Aza isan'andro fantasy fanatanjahan-tena mpankafy be mino ny lalao dia mifototra bebe kokoa eo amin'ny fahaiza-manao mihoatra noho ny vintana ary noho izany dia mazava ny didy amam-pitsipika ny fitantanana ny tsy ara-Dalàna amin'ny Aterineto ny Filokana ny Fampiharana ny Lalàna ny taona 2006, mandalo ny lalàna dia na inona na inona fa slam dunk any New York. Isan'andro fantasy sports (DFS) nandao ny New York, ny volana Martsa miandry mitohy ny hetsika ara-dalàna ny fanjakana lehiben'ny Fampanoavana Eric Schneiderman, fa amin'ity herinandro ity ireo mpanao lalàna ao amin'ny Fanjakana ny Fanjakana fa manana ny anjara toerany amin'ny alalan'ny fizarana ny lalàna haha-ara-dalàna amin'ny aterineto ny fifaninanana.
Ny fiderana ny heviny, Schneiderman nankany amin'ny dokambarotra tour milaza ny fanafihana amin'ny DFS ary nitsidika ny maro ny vaovao fandaharana, ary ny alahady maraina dia mampiseho maneho ny finoana fa ny indostria vao misandratra dia ivelan'ny fanjakana ny lalàna ambony ny poker tanana zavatra tsy. "Ny fanaovan-dalàna dia nasiam-panitsiana ny lalàna haha-ara-dalàna isan'andro fantasy fifaninanana fanatanjahan-tena, ny lalàna izay ho asako mba hiaro." Na dia eo aza ny fahefana mpanao lalàna dia mampiseho ny DFS sy ny andrasana sonia ny Cuomo,, Schneiderman tsy namoritra ny fikatsahana ny zavatra inoany no teo aloha tsy ara-dalàna ny asa fandaharana manomboka poker tanana. Tombanana eo amin'ny 600,000 DFS mpilalao ao New York, ny sehatra roa ireo mety mijery tsara ny $3 lavitrisa ambony ny poker manomboka tanana. "Araka ny efa nolazaiko hatrany am-piandohana ny biraon'ny famotorana isan'andro fantasy sports, ny asa dia ny mampihatra ny lalàna," Schneiderman hoy ny fanambarana. Ny mpiara-miasa aminy ao Albany no tsy nanaiky izany, ary nihazakazaka nanatona ny alalan ' ny lalàna aloha ny tsy tapaka voalahatra fivoriana ho an'ny 2016 kalandrie namarana ny herinandro lasa teo fandaharana texas holdem tanana. "New York fantasy fanatanjahan-tena mpankafy tonga, miaraka amin'ny mihoatra ny 100.000 ny mailaka sy an'arivony antso an-telefaonina ny mpanao lalàna," FanDuel CEO Nigel Eccles hoe fanafahana poker fifaninanana ao granada.
Poker fifaninanana ao kolombia
Mampiseho amin'ny 7 volom-borona casino
Volamena nugget casino tsy misy petra-bola bonus
Poker tsihy ho an'ny manodidina latabatra
Czy poker ny loza w polsce
Ny fomba hahazoana ny diamondra ao casino heist 2021
Volamena nugget casino online bonus fehezan-dalàna
Mgm casino ao md fanokafana
Ambony ny poker tanana texas holdem
Groupe casino adresse fahirano paris
Mankato mn mba mahagaga lake casino
Poker rehetra ao anatin'ny mpandresy